Amakhola ezenziwe ngoboya bemvelo
Akuzona zonke ilungu lezocansi elihle elikwazi ukuthenga ingubo enhle enhle kakhulu, kanti nemikhiqizo engabizi kakhulu eyenziwe ngoboya obubonakalayo ibukeka kahle kakhulu, ngakho-ke kungcono ukugwema ukuzithengisa nhlobo. Kodwa okunye okuhle kungaba amakolishi oboya bemvelo, okuyinto, nakuba engeyona imininingwane enjalo yesithombe, engeza isitayela nobukhazikhazi. Ngakho-ke, insika yeboya kufanele ibe nento kulabo besifazane befashini abafuna ukubheka i-chic nsuku zonke noma kunoma yiziphi izimo.
I-collar fur fur collar
Ngokuvamile inkinga enkulu ephakanyiswa nge-fur collar yilokho engayenza futhi okufanele igqoke nayo. Noma kunjalo, manje amakholare akhiphekayo ajwayelekile kakhulu futhi ngeke uwabonise kuwo wonke amakhamera wesibili, amantombazane amaningi kangaka azibuza ukuthi yini okufanele ayenze. Kodwa, empeleni, impendulo yalo mbuzo ilula: ungagqoka amakolishi asusiwe nganoma yini. Into eyinhloko ukwenza isithombe sibonakale sinentshisekelo, futhi wena ngokwakho uthande indlela obukeka ngayo. Ungaphonsa ubolomo obomvu phezu kwejazi, kodwa ngeke ubheke kahle futhi ku-jacket yakho noma ngisho nokugqoka, njengento ehlobisa. Into kuphela ongayifuni ukuyenza ngokuqondile ihlanganisa collar etholakalayo ne-jackets ezemidlalo noma ingubo. Naphezu kokuthi ama-jackets ezemidlalo angaba nama-fur collar, amakolishi asusiwe kubo awafanelekile ngokukhethekile.
Uma ukhuluma ngohlobo luni loboya obuzolikhetha, khona-ke inketho yebhajethi nokho okhethweni - ikhola yeboya fox. Fox fox ubukeka chic, kodwa ine intengo ebiza kakhulu, ngokungafani, isibonelo, mink efanayo.
Amajacketshi ane-fur collar
Uma ungakakulungeli ukugqoka uboya obususayo noma ungazi ukuthi yini engagqoka, khona-ke uzothola ijazi elinomsola wezinwele. Kuzofudumala, kujabulise, kuhle futhi kukhululekile. Kukhona namamodeli amajackethi ane-collars, ngakho ungayigqoka noma nini lapho ufuna khona. Ngendlela, amabhantshi kanye namajazi aphethwe yiboya bezinwele zibukeka kahle kakhulu. Nakuba ijaji yesi-classic ye- woolen eqoshiwe ngqo ne-fur collar izobukeka nje ihle kakhulu futhi inhlekazi.
Isikhwama esimhlophe - izithombe ezingu-32 zezikhwama zamantombazane ezimhlophe ezimfashini zazo zonke izinhlobo
Chain enegama entanyeni
Tiffany izindandatho - kanjani ukwahlukanisa original Tiffany ring kusuka fake?
Izicathulo zenjoloba zabesifazane
Indlela yokuwina umuntu u-Aries?
I-PDR ngosuku lokukhulelwa
Ukwelashwa kwesinye isisu
Izimpawu zokukhulelwa kwamakati
Amafutha epumpkin - izakhiwo eziwusizo kanye nokuphikisana
Alex - usuku lengelosi
I-Chlorophytum - ukunakekelwa ekhaya
Izigqoko zase-Summer Long 2014
Hydroperity for izinwele ezikhanyayo
Umbala wezinwele ezifashisayo 2013
Amapayipi enomvu kusuka emvubelo inhlama kuhhavini
UShannen Doherty: "I-Cancer yangenza ngaba umuntu ohluke ngokuphelele"